သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ကိုရင်+ကြည်မာ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 02:00
တရားသံကို မကြာခနကြားလိုက်ရတဲ့ ကိုရင်သာထွန်း နောက်တစ်ကြိမ် ကြည်မာချိန်းရင် စောင့်တော့မယ်မထင်ဘူးး)
သူကြီးမင်းလည်း ချစ်သူကိုပြောထားလိုက်အုံးနော် ဒညင်းသီးကလွဲရင် ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်လို့ :P
Friday, 16 November 2012 at 02:49:00 GMT
ဒညင်းသီးရနံ့ သင်းပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါလား... :)
Friday, 16 November 2012 at 03:32:00 GMT
အင့် ဒညင်းသီး စားပြီဆိုမှဖြင့် လေတော့လည်တော့မယ်လို့ ထင်နေတာ ၀မ်းပါလျှောသွားတာကိုး။ ဇာတ်လမ်းက အဲဒါနဲ့တင် ပြီးရောလား တဂျင်းမီးရေ။ တန်းလန်းကြီး...
(စကားပြောဟန်လေးနဲ့ အရေးအသားက အိအိရိရိရှိပြီး ချောမွတ်နေတာပဲ)
book book လောကနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် တီတင့်ရဲ့ Comment ကို like လုပ်တယ်ကွာ။
အော် စကားမစပ် ကိုရင်သာထွန်းဆိုတာ တဂျင်းမီးရဲ့ nick name မဟုတ်ပါဘူးနော်။ :v
Friday, 16 November 2012 at 05:10:00 GMT
ငယ်ရည်းစား နာမည်က ကြည်ကြည်မာလား ဟင်... ဟီး...း)
ရယ်လိုက်ရတာ... ရုံးမှာ ဖတ်နေရင်း ပါးစပ်ကို လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ထားရတယ်...
ဇာတ်လမ်းလေး ဆက်အုံးနော်... နောက်တစ်ခါခိုးတော့ ဘယ်လို ထပ်လွဲသလဲ ဆိုတာလေး.... ;P
Friday, 16 November 2012 at 07:31:00 GMT
ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဂျက်ကဒညင်းသီး
ကြည်မာကိုလဲ နောက်တခါ မစားခိုင်းပါနဲ့တော့နော်
Friday, 16 November 2012 at 09:55:00 GMT
သကြိးမင်း လည်း ဒညင်းသီး ရေမွှေးကြောင့် လူပြိုကြီး များဖြစ်ခဲ့လေသလား ...
Friday, 16 November 2012 at 09:59:00 GMT
ဒါ တဂျီးမင်းမဖြစ်ခင်... ငယ်ဘ၀အကြောင်းပြန်ပြောင်း အောက်မေ့ပြီးတော့ ရေးထားတာဖြစ်ရမယ်... :P
Friday, 16 November 2012 at 11:12:00 GMT
သူကြီးမင်းတို့ လုပ်လိုက်မှဖြင့် အူကိုနာလို့ ။
တီတင့်ရာ ဒီသူကြီးလား ချစ်သူရှိမှာ
သူ့ဖာသာ အဖြစ်မရှိလို့ တရားသဘောတွေနဲ့ ရောချနေတာကိုး)။
သည်တစ်ခါ ကျုပ်အလှည့် သူကြီး။
Friday, 16 November 2012 at 12:33:00 GMT
နောက်တခါဆို ကိုရင် ..ကြည်မာ့ကိုကောက်ရိုးပုံနားမှာ
မျိုးတွေ သကြီးမင်းက အတော်ပိုင်သကိုး..
Friday, 16 November 2012 at 12:54:00 GMT
သြော်.. ဒညင်းသီး ဒညင်းသီး..
Friday, 16 November 2012 at 16:28:00 GMT
Friday, 16 November 2012 at 17:03:00 GMT
Saturday, 17 November 2012 at 13:44:00 GMT
သူဂျီးမင်းရေ နောက်တစ်ကြိမ်ခိုးဖြစ်လား မခိုးဖြစ်တော့ဘူးလား ဇာတ်လမ်းကို သေချာလဲသိမ်းမပေးဘူးနော် ဒါမှမဟုတ် လူပျိုကြီးဖြစ်သွားလေသတည်းများလား...
Sunday, 18 November 2012 at 08:11:00 GMT
ဟဟဟဟဟ ရီလိုက်ရတာ.... xD xD ဒညင်းသီးတန်ခိုးပြတဲ့ သဘော ဟီးဟီးဟီး
Sunday, 18 November 2012 at 18:02:00 GMT
"ဒါဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ရတနာတုံးကြီးလား အညစ်အကြေးတုံးကြီးလား"
"ဒါဖြင့်ရင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ နှစ်သက်စရာလား ရွံရှာစရာကြီးလား"
ဒီစကားတွေ ဘာဖြစ်လို့ အထပ်ထပ် ပြန်ရစ်နေတာလဲ သူဂျီးရာ . ကြည့်ရတာ မိန်းမတွေကို စိတ်နာနေတယ် ထင်တယ် ဟိဟိ..
အော် ကြည်မာ ကြည်မာ .. အိုခါနီးမှ ဓညင်းသီးက ဖျက်ရတယ်လို့.. :P
Tuesday, 20 November 2012 at 19:26:00 GMT
အဟား ..အကိုကတော့လေ.. ရေးတက်ပလို့..:)
Tuesday, 27 November 2012 at 08:01:00 GMT
သယ်ဂျီးရေ ကျုပ်တော့ အခြေအနေအရ အပြီး မဖတ်နိုင်ဖူးဗျာာ ဒီတော့ကူးထားလိုက်တယ် နက်ဖြန်ကျမှဖတ်လိုက်မယ်နော့း)
ထမံသီသူလေးတွေချောသဗျာ့ သယ်ဂျီးအတွက် ရှာပေးထားရမလားး)
ခေတ္တ(သို့) အပြီးး)
Wednesday, 28 November 2012 at 13:32:00 GMT
အလည်လောက်ပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ စာလေးတွေဖတ်သွားတယ်..အိမ်မက်ညံ့လို့ပဲ ဖြစ်မယ် သူတို့ပြောနေကြတဲ့ သူကြီးမင်း သူကြီးမင်း ဆိုတာ ခုမှ ပဲ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိတော့တယ်။.။။း))နောက်ဆို မကြာမကြာ လာလည်မယ်နော်..။
Wednesday,5December 2012 at 00:08:00 GMT
Our creative painters are university professors,their energy and creativity is strong.their works have excellent collection [url=http://www.collieart.com]oil painting[/url] value,there isamassive amount works were collected by foreign collectors and art museum.our creative painters have various rich imaginations and creativity.our painters may in accordance with the picture and so the idea you provide to help with making the initial .
Wednesday, 23 January 2013 at 19:47:00 GMT
Farm [url=http://bestuff.com/profile/start5money] oil painting[/url] Works Which may Photographs / Acrylic Work Closed Different Many agreed upon oils decorating, and much more obtainable Antiques, given that quality VB Neuruppin Old Petrol Painting likeaprofessional To Philippine Bare Gasoline Ideas for painting Cookware Nude photographs Very many years good old real life piece on the subject of request it is typically shipped 90 EUR Neuruppin Style Oil Piece of art Fine art Oil and gas Painting likeaprofessional "rain-slicked roads "on material and even extender, graphic dimensions 50x70cm. Many Eight hundred EUR Z¨1hlsdorf essential oil pictures Hi there, I really at this point offer an fat painting likeapro, which inturn contains this personalized Otto Lehmann. Merely NEN VB Potsdam essential oil painting likeaprofessional by way of wood pattern spectacular good old petrol art work Some,1000 EUR VB Glienicke PerVersus Nordbahn oil and gas painting likeapro fish oils concerning cloth Past antique. Volume together with structure 78 conditions 95 centimeters. VB Potsdam petrol painting mountain range marketing at this point autographed your well-preserved prints about artisan P. Petry. Size 55 back button 96 35 EUR VB Baruth And Label fat painting them circa 1830 gasoline ideas for painting circa 1830 bed-linen on stretcher, additional dimensions of the style 63 c 51 centimeters, within lengths and widths 100 c 140 EUR Zossen Yesterday evening, Thirteen:60 Fat Painting likeapro, flower quarta movement coffin delightful acrylic painting them, (for my situation) not likely familiar ok'd, given that the 70s inherited. VB Potsdam Last week, Eighteen:36 through aquarium tank, aquarium tank past shot aquarium sell off approximately 35cm diameters, with the help of trim 11 EUR Neuruppin
Monday,4February 2013 at 11:58:00 GMT